Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Iyo Madaxweynaha Masar Oo Kulmaya - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaRa’iisal Wasaaraha Itoobiya Iyo Madaxweynaha Masar Oo Kulmaya
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la filayaa in magaalada Moscow ee waddanka Ruushka uu kulan kula yeesho Madaxweynaha waddanka Masar Abdel-Fattah al-Sisi, kaas oo ay kaga wada-hadli doonaan sidii loo dejin lahaa khilaafka ka taagan dhismaha Biyo-xidheenka wabiga Nile.
Madaxweynaha Masar oo ka hadlayey magaalada Qahira ayaa waxa uu sheegay in ay kulmi doonaan Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed, ayna iskugu tegi doonaan magaalada Moscow, hase yeeshee muu sheegin waqtiga la filayo in kulankaasi qabsoomi doono. Laakiin Wakaaladda wararka waddanka Masar ee MENA ayaa xustay in kulanku dhici doono dabayaaqada bishan.
Abdel-Fattah al-Sisi waxa uu tibaaxay in Itoobiya iyo Sudan aanay la gaadhin heshiis ku saabsan buuxinta gunta hoose ee biyo xidheenka (Biyaha uu qabanayo), laakiin waxa uu xusay in ay wali socdaan wada-hadallo lagu xallinayo arrintaas.
Abiy Ahmed iyo Abdel-Fattah al-Sisi ayaa Jimcihii khadka telefoonka ku wada-hadlay, waxaanay dul istaageen muhiimadda ay leedahay in saddexda waddan ee Itoobiya, Masar iyo Sudan ay heshiis ku gaadhaan wada-xaajoodka u socda ee ku saabsan biyo xidheenka ay Itoobiya ka samaynayso wabiga Nile.
Intii uu wada-hadalka telefoonku socday, waxay labada hoggaamiye isku waafaqeen in ay tahay inay heshiis ka gaadhaan, sidii ay horeba iskugu waafaqeen sannadkii 2015-kii.
Wasiirro ka socday Itoobiya, Masar iyo Sudan ayaa horraantii bishan kulan ku yeeshay caasimadda Sudan ee Khartuum.
Murugada Qaraxii SOOBBE: Aabbo La Dhibaataysan Korinta 32 Carruur Ah Oo Ku Agoomoobay Qaraxaas